गोरी महिलाले कालो बच्चा जन्माएपछि श्रीमानलाई लगाइन् अनौठो आ’रोप, श्रीमान तिन छ’क्क” – Life Nepali
गोरी महिलाले कालो बच्चा जन्माएपछि श्रीमानलाई लगाइन् अनौठो आ’रोप, श्रीमान तिन छ’क्क”
काठमाडौ । संसारमा कहिले काँही निकै अचम्म लाग्दा खबर आउने गर्छन । हालै स्पेनवाट यस्तै अनौठो समाचार आएको छ । स्पेनमा एक गोरी महिलाले कालो बच्चा लाई जन्म दिएपछि आफ्ना श्रीमानलाई अनौठो आ’रोप लगाइन् । पति पत्नीमा निकै हार्दिकता थियो । तर जव महिला सुत्केरी भइन् सबै माहौल एकाएक परिवर्तन भयो । उनले बच्चा देखेपछि कसैले नसोचेको आरोप पतिलाई लगाइन् । थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’,
आफुले कालो वर्णको बच्चा जन्माएपछि ति महिलाले श्रीमानलाई अरु कुनै कालो वर्णको महिलासंग सम्पर्क राखेको आरोप लगाएकी छन् । यो घटना जामोरा (सपेन) को अस्पतालमा केही समय अघि सम्म सबै ठिक थियो । एकै छिनमा अस्पतालमा हल-चल भयो । महिलाले जन्म दिएको बच्चा गोरो थिएन । त्यो कालो रङ्गको थियो । यस्तो थाहा पाएपछि महिला आफ्ना पतिसङ्ग रिसा’इन । लेवर रूममा बच्चा को जब सम्पूर्ण सानो शरीर बाहिर आयो, डाक्टरले चाँडै पत्ता लगाए कि बच्चा एकदम सही छ, एक कालो केटा ।
उनको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या छैन । तर जब चिकित्सकले उनलाई बच्चा हातमा दिए उनी बच्चा देखेर अचम्म परिन् । उनले अचम्मको ब्यवहार पनि देखाइन् । उनले तुरुन्तै आफ्नो श्रीमानको हात तान्दै भनिन, की कुकुर ! यो कस्को छोरो हो, मलाई थाहा थियो कि तिमीले मलाई धोका दिइरहेका छौ । हेर त यो तिमीले यो के गरेका छौ । श्रीमतीले यसो भन्दा उनका श्रीमान छक्क परेर उनको अनुहारमा हेरीरहेका थिए ।
Previous अविवाहित महिलाको संख्या बढेपछि दुईवटी श्रीमती बिहे गर्ने पुरुषलाई सरकारले भत्ता दिने !
Next गाला हेरेरै थाहा हुन्छ महिलाको स्वभाव, कोठी र डिम्पलले दिन्छ यस्तो संकेत !